IVictoria House Resort & Spa, iBelize Debuts eNtsha yoLonwabo kunye noXolo eLangeni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » IVictoria House Resort & Spa, iBelize Debuts eNtsha yoLonwabo kunye noXolo eLangeni
Iindaba zaseBelize • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Septemba 18, 2021
Ukujonga iphuli yeVictoria House Resort & Spa, Belize
Ipropathi yesiqithi iVictoria House Resort & Spa ephumeleleyo kunxweme lwaseBelize inikezela iindwendwe uluhlu lwezinto ezintle zokubaleka okungalibalekiyo.
Indawo yokubhengeza yabhengeza ukunikezelwa kweendwendwe ezimbini ezitsha-i-Petite Escape kunye ne-Blissfully Belize Packages ukukhuthaza ukuphumla okuphezulu okanye ukufuna ulonwabo.
IVictoria House yindawo ezolileyo apho iindwendwe zinokonwabela ukuphumla kunye nolonwabo olunomdla.
Indawo yokuhlala ebutofotofo, izinto ezikumgangatho wehlabathi, kunye nenkonzo enobabalo zizinto eziya kufunyanwa ziindwendwe kwikhefu labo elifanelekileyo.
IVictoria House Resort & Spa, eBelize, ipropathi esondeleyo netyebileyo ebekwe kwisiqithi sase-Ambergris Caye saseBelize, uyonwabile ukuqala amatyala amabini amatsha eendwendwe- iPetite Escape kunye neBlackful Belize Packages ukukhuthaza ukuphumla okuphezulu okanye ukonwaba. Iindwendwe zepropathi yolwandle zinokonwabela uhambo lwe-3-to-7-ebusuku lokubaleka ukubonelela ngezothando, ukuphumla, ukonwaba kunye nokuzonwabisa. Ngeendawo zokuhlala ezintle, izinto ezikumgangatho wehlabathi, kunye nenkonzo enobabalo, iVictoria House Resort & Spa sisimo esifanelekileyo sokunxibelelana kwakhona nabantu obathandayo kunye nokwenza iinkumbulo.
"IVictoria House yindawo ezolileyo apho iindwendwe zinokonwabela ukuphumla kunye nezinto ezininzi ezonwabisayo," utshilo uJanet Woollam, umphathi jikelele weVictoria House Resort & Spa. “NgePetite Escape Package okanye kwiBlize eBelize Package, iindwendwe zinobutyebi obukhethiweyo kwaye zingasebenzisa izibonelelo zokuphumla ngeli xesha zinethuba lokuhlola esi siqithi sihle kunye namava enkcubeko yazo eyahlukileyo kwisantya sabo kwigalufa labo inqwelo. ”
The Iphakheji yokubaleka encinci Iquka:
• Indawo yokuhlala ebutofotofo nokuba iseCasita okanye kwigumbi lePalmetto
• Isidlo sakusasa esipheleleyo yonke imihla
Ibhotile ye-Prosecco yakufika kunye ne-cocktail yase "Belizean Colada"
• Ngenye imini ukuqesha inqwelo yegalufa (kubandakanya igesi kunye neinshurensi)
The Yonwabele iPhakheji yeBelize Iquka:
Ukutyikitywa kokuTyikitywa kweMassage unyango lweyure enye kwi-spa (exabisa i- $ 220)
• Ikhredithi eyi- $ 150 yokusebenzisa ivenkile yokuntywila kwindawo
Ibhotile ye-Prosecco kunye ne-cocktail yase "Belizean Colada"
• Ngenye imini ukuqasha inqwelo yegalufa kubandakanya negesi
• Ukusetyenziswa okungenasiphelo kweebhayisikile, ii-kayaks, iibhodi zokumisa izithuthi kunye nezixhobo ze-snorkel
IVictoria House Resort & Spa yaziwa ngokuba yindawo yayo yokuphumla "yesiqithi vibe" kunye nobuhle beembadada ezinyaweni kuzo zonke iiholide. Ipropathi inendawo yokuhlala ezahlukeneyo ezinje ngeCasitas yeTropical, izindlu ezizimeleyo ezinamachibi abucala, izindlu zokujonga ulwandle, okanye amagumbi ahonjiswe ngobunono kwisakhiwo esinemigangatho emibini. IVictoria House Resort & Spa nayo iyazingca ngokubonisa Inkonzo epheleleyo ye-spa kunye nokuqina komzimba kunye namaziko amathathu ahlukeneyo okupheka kuwo wonke umsitho.
I-Perched emaphethelweni yenye yezona zinto zimangalisayo zendalo zehlabathi, iBelize Barrier Reef, iVictoria House ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuphefumla. Iindwendwe zinokuphumla kumachibi ahlaziyayo esiza kunye neelwandle zabucala, okanye ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi emangazayo enje ngebhayisikile, ikhayaking okanye ukubhexa iphedi. Amaqela anamava kunye namagorha eVictoria House nakwivenkile yeDantasea Dive eqinisekisiweyo ye-PADI ebekwe kwindawo yokungena kwepropathi, banokucwangcisa ubuninzi bemisebenzi yeendwendwe ezinje ngokuntywila, ukuntywila emanzini, ukuloba, kunye nokuzikhusela. Ivenkile yeFantasea Dive ikwabonelela ngokuqeshisa izixhobo kunye neziqinisekiso.
Isiqithi sifikeleleka ngokulula ngenqwelomoya yemizuzu eli-15 yokuhamba ngenqwelomoya ukusuka eBelize isixeko, kwiikhilomitha ezingama-35 nje kude. Ukuphonononga iitempile zakudala zaseMayan, i-zip-lining over jungle canopies egcwele ii-Black Howler Monkeys, ukuthatha inxaxheba kuhambo lwamahlathi emvula, okanye uhambo lokuntywila kwi-World Heritage coral reef zonke zinokwenzeka e-Ambergris Caye kwaye zinokulungelelaniswa kwiqela le-concierge yeholide. Zombini ezi phakheji ziyafumaneka ngoku ukuya kuDisemba 20, 2021. Iinkcukacha ezithe kratya kunye nendlela yokubhukisha fu maneka apha.
Ukongeza, kwimpilo nentlalontle yeendwendwe, bonke abasebenzi baqeqeshwe ngokupheleleyo ngokubaluleka kokugcina amanqanaba aphezulu ezococeko kunye neenkqubo zokhuseleko ngelixa behambisa amava obuchule nokwamkela iindwendwe. Indawo yokuphumla ibeke izitishi zokucoceka ngesandla kuyo yonke ipropathi, kufakwe iiyunithi ze-UVC ezigcinwe ngesandla zokubulala iintsholongwane zokucoca amagumbi eendwendwe, iindawo zikawonke-wonke, kunye neendawo zokutya neziselo, kwaye zisebenzisa ezinye iimveliso zokucoca ezikhuselekileyo, ezinjengeAzone AZone yokucoca amanzi kunye ne-A / B Cold Ukutshaya intsholongwane kwindawo efanelekileyo.
Malunga neVictoria House Resort & Spa
Ifumaneka eBelize eAmbergris Caye, eyona inkulu kwii-Belizean Islands, iVictoria House ikwiikhilomitha ezimbini kumazantsi eSan Pedro Idolophu entle. Indawo yokuphumla inika incasa yokuhombisa okunganazi zihlangu okugcina iindwendwe zibuyele ngaphezulu, zinamagumbi eendwendwe angama-42 asusela kwisitayile ukusuka kuphahla lwengca, iitasitasi ukuya kwizindlu eziselunxwemeni ezinamachibi abucala, amagumbi okutyala, kunye neendawo zokujonga ulwandle. Indawo yokutyela yasePalmilla kunye ne-Admiral Nelson's Bar zidume ngokutya okumnandi kunye nokusela okunconywayo ngenkonzo engaqhelekanga, eyeyakho. Ukuqwalaselwa kweenkcukacha ngabasebenzi nabaphathi ngokufanayo kuye kwaphumelela amawonga kumajelo eendaba aphesheya kunye namabhaso kwimibutho eyaziwayo efana neConde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Ngolwazi oluthe kratya, nceda tyelela apha.
Funda malunga ne-Medicare namhlanje kwi-Intanethi yeWebhu ekwi-Intanethi
Kutheni iSpain imisa ithuba eliKhulu leHlabathi ...
Umphathi we-USTOA kwiNyuthazo yokuqala yeMalta-Israel kwi...
Entsha kwiiCinemas kuphela-iKrisimesi kunye nabakhethiweyo:...
Ukuluhlu oludumileyo: iTshayina isoyikisa iTaiwan...
Ukumkani waseSpain unomyalezo obalulekileyo we-UNWTO...
Urhulumente wase-UK: Inqanaba lezoyikiso zobugrogrisi 'libukhali' ...
IHawaiian Air Flight Attendant ekhutshwe emva kokuba ...
I-China ityhila uyilo lweOlimpiki yaseBeijing ka-2022...
Ilizwe laseSlovakia lamva nje le-EU uku-odola ukuvalwa...
Losartan High Blood Pressure Amayeza ngoku uyakhunjulwa
Ixesha elitsha kuKhuseleko loKhenketho lwaseLatin American
I-United Airlines: Ngakumbi iJordani, iPortugal, iNorway kunye ...
I-Smart TV ibonelela ngeMowudi entsha yoMenzi wefilimu
Akukho Ihotele iqhelekileyo: ISt. Regis ibonelela ngesisombululo esitsha ...
Iinqwelomoya ezintsha ezivela eAmsterdam ukuya eBarbados
Imoto eNtsha yePremium yeMidlalo yeCompact